इटहरी । लामो समय देखि सुनसान बनेका पुर्वी नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा क्रमश मानविय चहलपहल वढ्न थालेको छ । कोरोना कहरका कारण पर्यटकीय गतिविधिहरु नहुदा सुनसान बनेका पर्यटकीय स्थलहरु खुल्ने क्रम सुरु भएसंगै मानविय चहलपहल बढ्न थालेको हो । पछिल्ला केही वर्ष यता आन्तरिक पर्यटकहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको तालतलैया खुल्ला गरिएसंगै आन्तरिक पर्यटकहरु आउने क्रम सुरु भएको छ । ...
इटहरी । वितग ९ महिना देखि वन्द रहेका चलचित्र हलहरु खुलेपनि एक महिना हुन लाग्दा पनि पुर्वी नेपालका चलचित्र हलहरुले दर्शक पाउन सकिरहेका छैनन । कोरोनाका कारण गत वर्षको चैत्र देखि वन्द रहेका चलचित्र हलहरु गत पुस महिनाको दोस्रो साताबाट सञ्चालनमा आएपनि दर्शकहरु फिल्म हेर्न हल सम्म न्युन संख्यामा मात्र आएका देखिन्छ । लामो समय देखि चलचित्र हलहरु वन्द रहेर खुल्ला गरिपनि आसातित रुपमा दर्शकहरु हलमा नआए...
राष्ट्रिय एकता परिषदका अध्यक्ष एवं शाहीकालिन मन्त्री निक्ष शमशेर राणाले प्राईम एच. डि. टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम “ जनता जान्न चाहन्छन “ मा कार्यक्रम प्रस्तोता ऋषि धमाला संग कुरा गर्दै ‘हिन्दू राष्ट्र’ भारतको एजेण्डा भएको बताएका छन् । राणाले नेपाललाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाउने भारतीय एजेण्डा भएकोले हिन्दू राष्ट्र नभई हिन्दू अधिराज्य नेपालीहरुले नै लिएर आउने दाबी गरेका हुन्। राणाले भने, ‘...
विराटनगर । फेसन शोमा फोटोग्राफीका लागि पोखराबाट बोलाइएका आफ्नै पाहुनाको फोटोग्राफी सम्बन्धि सामान चोरी गर्ने दुईजना पक्राउ परेका छन् । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा फेसन शो कार्यक्रम रहेको बताउँदै झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–६ का अनुप ढकालले पोखराका महानगरपालिका–२० का बिमल कार्कीको सामान चोरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।चोरी आरोपी ढकालसँगै उनका सहयोगी साराशं भट्टराईलाई समेत मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको...
ईमेल: newssaptak[email protected]